ब्याजदर वृद्धिपछि राष्ट्र बैङ्कको हस्तक्षेप – नेपालका बैङ्क छाडा भएकै हुन् ? | Ratopati
दोहोरो अङ्कको वाणिज्य बैङ्क आवश्यक छैन – भट्टराई
personनिकेश खत्री exploreकाठमाडौं access_timeकात्तिक ३, २०७८ chat_bubble_outline0
निकेश खत्री / राताेपाटी
वाणिज्य बैङ्कहरूले आफूखुसी निक्षेप ब्याजदर बढाए/घटाएपछि राष्ट्र बैङ्कले हस्तक्षेप गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कले मंगलबार राति तीन बुँदे निर्देशन जारी गर्दै २४ घन्टाभित्र ब्याजदर परिवर्तन गर्न भनेपछि बैङ्कहरू ब्याजदर परिवर्तनतर्फ लागेका छन् । उक्त निर्देशनसँगै ब्याजदर बढाएका बैङ्कहरूले आज साँझसम्म ब्याजदर परिवर्तन गरिसक्नुपर्ने छ ।
संस्थागत निक्षेपकर्ताको रकम आफ्नो बैङ्कमा तान्ने लक्ष्यसहित १९ वटा बैङ्कले निक्षेपको ब्याज बढाएका थिए । जसमध्ये हिमालयन, एनआईसी एसिया र लक्ष्मी बैङ्कको निक्षेप ब्याज ११ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो । यसबाहेक, अन्य ७ बैङ्कले १० प्रतिशत माथि पुर्‍याएका थिए ।
केन्द्रीय बैङ्कको चाहनाविपरीत बढ्यो ब्याजदर
​अधिकांश बैङ्कले निक्षेपको ब्याजदर बढाएपछि कर्जा ब्याजदर थप बढ्ने निश्चित थियो । जसलाई रोक्न राष्ट्र बैङ्कले कडा निर्देशन जारी गर्दै निक्षेप ब्याजदरमा बैङ्कको मनोमानी रोकेको छ । यससँगै नेपालका वाणिज्य बैङ्कहरू छाडा भएको र यसलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैङ्कको सिधा हस्तक्षेप नै आवश्यक परेको छ ।
​निक्षेप ब्याजदर बढाउँदा एउटा बैङ्कमा राखिएको संस्थागत निक्षेपकर्ताको रकम अर्को बैङ्कमा जाने मात्रै हो । निक्षेपको ब्याज बढाउँदैमा अहिले बजारमा देखिएको तरलताको अभाव छिनभरमै ठिकठाक पनि हुँदैन । त्यसैले, यस्तो समयमा नेपालका वाणिज्य बैङ्कमा छाडा प्रवृत्ति देखिएको छ । यस्तै, बैङ्कको चार वटा स्रोत (डिपोजिट, विदेशी ऋण, डिबेन्चर र रिफाइनान्सिङ) मध्ये अन्य सबैलाई बिर्सेर निक्षेपलाई मात्र जोड दिनुले समेत छाडा भएको सङ्केत दिन्छ ।
कात्तिकमा निक्षेपको ब्याजदर घटाएका बैङ्कहरूले समेत असोजमा ब्याजदर बढाएका थिए । सानिमा र सनराइज लगायत बैङ्कले असोजमै निक्षेपको ब्याजदर बढाएर आफूलाई चाहिने जति निक्षेप सङ्कलन गरेपछि कात्तिकमा ब्याजदर घटाएका हुन् ।
आफैँले लाइसेन्स दिएका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई आफैँले छाडा भए भन्न नमिल्ने राष्ट्र बैङ्क बताउँछ । तर, स्रोत सङ्कलनका अन्य उपायलाई बिर्सेर डिपोजिटमा ध्यान दिँदा ब्याजदर बढेको राष्ट्र बैङ्कको भनाई छ । बैङ्कहरूले निक्षेप बढाएर मात्रै स्रोत सङ्कलन गर्नतर्फ जोड नदिएपनि हुने केन्द्रीय बैङ्कले बताएको छ ।
कात्तिकमा ब्याजदर बढाउने बैङ्कहरू मात्र नभई घटाउने बैङ्कमा समेत छाडा प्रवृत्ति प्रष्ट झल्किन्छ । सानिमा र सनराइजले असोजमै ब्याजदर नबढाएको भए अहिलेको स्थिति नै नआउने सम्भावना बढी हुने बैङ्कहरू बताउँछन् ।
के भन्छ राष्ट्र बैङ्क ?
बैङ्कहरू स्रोतको अन्य विकल्पलाई बिर्सेर निक्षेप संकलनतर्फ लाग्दा ब्याजदर वृद्धि भएको राष्ट्र बैङ्क बताउँछ । बैङ्कका सूचना अधिकारी नारायण प्रसाद पोखरेलले बैङ्कहरूले विदेशी ऋण, डिबेन्चर र रिफाइनान्सिङमा ध्यान नदिएर डिपोजिट (निक्षेप)मा ध्यान दिएको बताए । फलस्वरुपः निक्षेपको ब्याज बढ्न गयो ।
निक्षेपको ब्याज बढ्दा राष्ट्र बैङ्क चिन्तित हुनुपर्ने कारण नभए पनि निक्षेपको ब्याज बढ्दा कर्जाको समेत ब्याज बढ्ने भएकाले निर्देशन दिनुपरेको पोखरेलले बताए । उक्त निर्देशनसँगै राष्ट्र बैङ्कले वाणिज्य बैङ्कहरूलाई निक्षेपसँगै अन्य स्रोतलाई समेत परिचालन गर्न भनेको उनको भनाई छ ।
यद्यपि, आफैँले लाइसेन्स दिएका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई आफैँले छाडा भए भन्न नमिल्ने राष्ट्र बैङ्क बताउँछ । तर, स्रोत सङ्कलनका अन्य उपायलाई बिर्सेर डिपोजिटमा ध्यान दिँदा ब्याजदर बढेको राष्ट्र बैङ्कको भनाई छ । बैङ्कहरूले निक्षेप बढाएर मात्रै स्रोत सङ्कलन गर्नतर्फ जोड नदिएपनि हुने केन्द्रीय बैङ्कले बताएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सुरु भएपछि राष्ट्र बैङ्कले १०० अर्ब रुपैयाँ रिपो र १०० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ओभरनाइट रिपो वाणिज्य बैङ्कहरूलाई उपलब्ध गराइसकेको छ । यस्तै, ६०० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लिक्विडीटी फ्यासिलिटीसमेत बैङ्कलाई राष्ट्र बैङ्कले उपलब्ध गराएको छ । तर, बैङ्कहरूले यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा तरलता अभाव भएको राष्ट्र बैङ्कको निष्कर्ष छ ।
नेपालमा दोहोरो अङ्कका बैङ्क नचाहिने वित्तीय विश्लेषकहरू बताउँछन् । धेरै वटा बैङ्क सञ्चालनमा रहँदा ब्याजदरको समस्या दोहोरिएकाले २७ वटा वाणिज्य बैङ्कलाई घटाएर ६ वटामा ल्याउनुपर्ने वित्त विश्लेषक अनलराज भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘१० वटाभन्दा कम सङ्ख्यामा वाणिज्य बैङ्क नल्याएसम्म ब्याजदरको समस्या दोहोरिरहन्छ । त्यसैले राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कको सङ्ख्या घटाउन पहल गर्नुपर्छ ।’
यसो भन्छन् उद्योगी व्यवसायी
वाणिज्य बैङ्कहरूले आफूखुसी ब्याजदर बढाउन थालेपछि उद्योगी/व्यवसायी आक्रोशित बनेका थिए । उद्योगी/व्यवसायीले विज्ञप्ति नै निकालेर ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने र नियन्त्रण नभए ठुलो समस्या आउने बताएका थिए । कात्तिक लाग्नासाथ ब्याजदर बढेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले समेत यस विषयमा छलफल गर्न बैठक डाकेको थियो ।
महासंघका कार्यकारिणी सदस्य प्रबलजंग पाण्डेले बैङ्कहरूले निक्षेप ब्याज ११ प्रतिशत पुर्‍याउँदा उद्योग व्यवसाय सङ्कटमा पुग्ने स्थिति आएको बताए । यद्यपि, राष्ट्र बैङ्कको हस्तक्षेपपछि केही राहत महसुस भएको उनको भनाई छ । ‘कोभिड–१९ महामारीबाट भर्खरै तङ्ग्रिँदै गरेको उद्योग व्यवसाय ब्याजदरको चपेटामा पर्दा सिङ्गो अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्ने स्थिति रहन्थ्यो,’ उनले रातोपाटीसँग भने ।
नेपाल उद्योग परिसंघ, प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले बैङ्कहरूमा मनोमानी प्रवृत्ति देखिएको बताए । बैङ्कहरूले धमाधम निक्षेपको ब्याज बढाउन थालेपछि रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले वाणिज्य बैङ्कहरूमा मनोमानी प्रवृत्ति देखिँदा समग्र अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्ने बताए ।
भने, ‘उद्योगी व्यवसायीले ब्याज लिँदा वर्षभरिमा ७/८ प्रतिशत भित्र कर्जाको ब्याज रहने अनुमानसहित लिएका थिए । तर, एक महिनामै ११ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेपछि उद्योगीहरू आत्तिएका थिए ।’
६ वटाभन्दा बढी बैङ्क चाहिँदैन – विश्लेषक
राष्ट्र बैङ्कले चाहेमा छोटो समयमै बैङ्कको सङ्ख्या १० भन्दा कममा झार्न सक्ने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने भट्टराई बताउँछन् ।
खत्री रातोपाटीका लागि आर्थिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।
ग्लोबल आइएमई बैंक र नेपाल क्यिरिङ्ग हाउसबीच सम्झौता
तीन इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच गाभिने सहमति
ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको नाफा ७१ प्रतिशतले बढ्यो
नबिल बैंकद्वारा कर्मचारी परिवारका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम सुरु
१ अर्ब बराबरको ऋणपत्र जारी गर्दै लुम्बिनी विकास बैंक
तेस्रो त्रैमासिकका अधिकांश सूचकहरूमा एनआईसी एसियाको छलाङ
डडेल्धुराको भागेश्‍वरमा वडादेखि पालिकासम्म काँग्रेस विजयी
काठमाडौँ महानगरमा वालेन्द्र साह प्रतिस्पर्धीभन्दा झण्डै दोब्बर मतले अगाडि
तुलसीपुर–१७ मा मतदान जारी राति ८ बजेदेखि गणना हुने
धनुषाको धनौजीमा काँग्रेस विजयी
धरानको मेयर - उपमेयरमा गठबन्धनको अग्रता
रुकुम पश्चिमको बाफिकोट अध्यक्षमा काँग्रेस र उपाध्यक्षमा माओवादी